“အတွေးစလေးတွေ”: ရသစာပေ ဘာကြောင့်သင် . . .
Posted by Han Kyi at 1:44:00 pm
လူသားစင်စစ်မှ ရသစာပေကို ခံစားတတ်တယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ ... ရေးထားတာ ကောင်းလိုက်တာ ဦးဟန်ကြည်ရယ်။ ဆရာလို့ မပြောရဘူး။ ရှင်းပြတာ သိပ်တော်တယ်။
ခုခေတ်မှာ ရသစာပေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်စပြုနေပြီ။ ရသစာပေကိုလဲ မခံစားတတ်ကြတော့ဘူး။ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ ဦးဟန်ကြည်တို့လို ဆရာတွေ များများလိုအပ်ပါတယ်။ ထပ်ရေးမယ့်ပို့စ်ကိုလဲ စောင့်မျှော်နေပါမယ်။ ဒီစာမြည်းလေးဟာလဲ အင်မတန်မှ အဖိုးတန်ပါတယ်ရှင်။
18 June 2011 at 14:42
ခုခေတ်ကလေးတွေက စာမေးပွဲအောင်ရုံကျက်တာကလွဲလို့ မြန်မာစာကို ဝါသနာ မပါကြတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဆရာ။ မြန်မာစာကို ချစ်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိကြတော့ဘူး။ တကယ်လို့ သူတို့တွေသာ မြန်မာစာကိုချစ်ရင် ရသစာပေတွေကိုလည်း ချစ်တတ်လာမှာ ခံစားတတ်လာမှာ သေချာပါတယ်။
ဆရာရေ.. ပြင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကစပြင်ရမှန်းတောင်မသိဘူးနော်.. ဒါတောင်ဒီမျိုးဆက်က ဆက်ပါလာဦးမှာ...း((
18 June 2011 at 20:19
ထိုကဲ့ သို့တပည့်များ သင်ပေးနေတာကြားရတော့
အလွန်ကို ၀မ်းသာ ကြည်နုးမိပါတယ်။
မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ကျောင်းဆရာ
တစ်ဝက်လောက်ကများ ဆရာ့ လိုမျိုးသင်ပေး
ကြမယ် ဆိုရင် ပြည့်မျိုးဆက် မတိုးတက်စရာ
ယခု ကျွန်တော် နှင့် သက်တူရွယ်တူ
များကတောင် ကျွန်တော် သီချင်းဖွင့်တဲ့အခါ
ဒါမှမဟုတ် သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ခေတ်ကို
ဆရာ့ အားကိုးရှိသွားလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ ဆရာ။
ရသစာပေတွေ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိတယ် ဆရာရေ။ ဆရာ့လို ဆရာမျိုး များများထွန်းကားပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့နော်။ ဆရာလည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာပါစေ၊ ချမ်းသာပါစေ...
Your post isathoughtful and important writing that truly reflects the general situation of the present-day generation and interest ( or lack of interest) in ‘ra-tha-sa-pei’ , aesthetic literature , Saya Han Kyi. I am sure any one who cares for our literature will read this post with great interest. In your post(in your last paragraph) you have described your wishes for the youths/ your pupils to understand, to enjoy and to be appreciative of ‘ra-tha-sa-pei’ as your ‘atta’, your ‘law-ba’. I would suppose such wishes ofateacher should rather be called your ‘san-da’, your ‘say-da-nar’ , your ‘metta’ .
I look forward to your follow-up writing on the topic. Thanks.
အခုခေတ်က ခံစားမှုအာရုံတွေ ဘယ်လို ပြောင်းကုန်လဲ မသိဘူးဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိင်သလောက် လုပ်နေတဲ့ အကိုရဲ့ စေတနာကို မြင်သာပါတယ်။ ရည်ရွယ်သလို ရှေ့သို့သာဆက်လျှောက်ပါ အကိုရေ..။
26 June 2011 at 06:00
ရသကောင်းကောင်း မရေးတတ်ပေမဲ့ ရသကောင်းကောင်းကိုတော့ လွန်စွာမှ ကြိုက်နှစ်သက်လှတဲ့ တုံးဖလားသူကြီးမင်း ဖြစ်ပါတယ်။း))))
အားပေးနေမယ် ဆရာဟန်။ ဆက်လက်သာ လှော်ခတ်ပါလေ။ ရသခရီးကို စီးပြီး လိုက်ပါနေပါ့မယ်။
ဒီမှာတော့ ရသ စာပေ သင်တန်းတွေတောင် ရှိတယ်။ မာစတာ Master of Fine Arts (MFA) Program in Creative Writing မပြောနဲ့ ညကျောင်းနဲ့ ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေတောင် ရှိပါတယ်။